इराक–इरान भूकम्पमा मर्नेको संख्या १४० नाघ्यो - Koshi Online
इराक–इरान भूकम्पमा मर्नेको संख्या १४० नाघ्यो
सिन्हवा/रासस, कात्तिक २७
इराक र इरानको पश्चिमी केरमनसा प्रान्तमा आइतबार राति गएको भूकम्पमा परी कम्तीमा १ सय ४१ जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त क्षेत्र इराक इरानको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। उक्त क्षेत्रका साथै कुवेतमा पनि भूकम्पको धक्का महसुश भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा अधिकांश इरानी छन्।
उक्त भूकम्पमा परी इराकमा पनि ६ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। भूकम्प ७.३ म्याग्निच्युड मापन गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु कुर्द नजिकैको सहर हलब्जामा रहेको छ। इरानको इतिहासका धेरै शक्तिशाली भूकम्पहरुमा यो पनि शक्तिशाली भूकम्प रहेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
सो शक्तिशाली भूकम्पले इरानको पश्चिमी क्षेत्रमा थुप्रै नागरिक घाइते भएका छन्। अधिकारीहरुले सोमबार बिहानसम्ममा घाइते हुनेको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी नै रहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
भूकम्पको उद्वारका काममा खटिरहेको उद्वारकर्मी र अधिकारीहरुले सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्नसक्ने जनाइएको छ।
भूकम्पले कैयौँ घर भत्किएका छन्। भत्किएका भवनहरुको भग्नाबशेषबाट केहीलाई निकालिएको छ भने अरु केही अझै पनि पुरिएका छन्।
इरानको रेड क्रिसेन्ट संस्थाले सो भूकम्पबाट विशेषगरी इरानतर्फका आठवटा गाउँमा बढी नै क्षति भएको जनाएको छ। साथै अरु पनि कैयौँ गाउँ र सहरहरुमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ भने सञ्चार सेवा अवरुद्ध छ।
भूकम्पले बाटोमा समेत क्षति पुगेको छ। बाटो अबरुद्ध नै भएको छ। कतिपय स्थानमा भास्सिएको छ भने केही ठाउँमा पहिरोले आवतजावत नै बन्द गराएको छ। यसका कारण उद्धार टोलीहरुलाई क्षतिग्रस्त स्थानमा पुग्न गाह्रो भएको बताइएको छ।
भूकम्प लगत्तै अत्तालिएर घरबाहिर सडकमा निस्किएका मानिसहरु अहिलेसम्म पनि घरभित्र पस्न सकेका छैनन्। बारम्बारको पराकम्पनले उनीहरुमा त्रास फैलिएको बताइएको छ।
मानिसहरु सडकमा भेला भएर बसेका छन्। पराकम्पन आउनसक्ने डरले उनीहरु घरमा फर्किन सकेका छैनन्।
उता कुवेतमा पनि यस्तै अवस्था रहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरुमा राखिएका तस्वीरहरुमा कुवेतीहरु पनि पराकम्पनको त्रासले बाहिर सडकमै बसिरहेको देखिन्छ। तर कुवेतबाट क्षतिको अवस्थाको बारेमा भने केही जानकारी हुन सकिरहेको छैन।
क्यालिफोर्नियाको डढेलोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या ७७ पुग्यो : १० हजार परिवार…
श्रीलंकाको संसद्मा फेरि जात्रा : खुर्सानीको धुलो फ्याँक्नेदेखि कुर्सीको झटारोसम्म !
उत्तर कोरियाद्वारा उच्च सामरिक महत्वको नयाँ हतियार परीक्षण, अमेरिका तर्सियो !
श्रीलंकामा संसद् बैठक चलिरहँदा सांसदहरू ‘लडाइँ’मा उत्रिएपछि …..
क्यालिफोर्नियाको डढेलोबाट मर्नेको संख्या ५० नाघ्यो : डढेलो अझै नियन्त्रणबाहिर
१३ वर्षीय थाई बालकको ‘बक्सिङ खेल्दा खेल्दै रिङमै’ गयो ज्यान !…
आज फ्रान्स र उरुग्वेको भिडन्त हुँदै : एमबाप्पे र स्वारेजमा को चम्किएला ?
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १४:०६
चाकरी र घुसको रकम पुर्‍याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीलाई डाक्टरको राजीनामा पत्र
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:४३
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सुरक्षा सामग्री किन्न’ साढे २ करोड बजेट !
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:२७
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’बाट बाहिरिएका तेजेन्द्र गन्धर्वले ल्याए नयाँ गीत (भिडियोसहित)
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:०४
युइएफए नेसन्स लिगमा आज ७ खेल हुँदै : को–को भिड्दैछन् ?
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:४८
आफूलाई फिल्ममा रोल नदिएको भन्दै सलमानलाई ज्यान मार्ने धम्की
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:४६
मोटरसाइकलको ठक्करबाट कलाकार बिपिन कार्की घाइते, ‘जात्रै जात्रा’को छायांकन रोकियो
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:३४
झन् घट्दै सुनचाँदीको भाउ, आज कति छ ?
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:२५
ऋचा र छुल्ठिमको ‘यता न उता’ माघ अन्तिममा
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:२०
अब प्रदेश–१ को विराटनगरबाटै माउन्टेन फ्लाइट हुने
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:१३